Filtrer les éléments par date : vendredi, 22 janvier 2021
vendredi, 22 janvier 2021 21:30
Amidy amin'ny lanja ny vary fa tsy amidy amin'ny hadiry
Ny kapoaka dia famarana hadiry, fa tsy lanja, ny vary dia misy maivana misy mavesatra arakarak'ilay vary.
Omena anao ny taranja kajy T5 :
- Hadirin'ny kapoaka = Haavo x Velaran'ny faribolan'ny vodi-kapoaka
- Velaran'ny faribolana S = ΠR² (pi x R tanam-paribolana, atsasaky ny savaivo, toradroa)
- Ny lanjan'isam-bentin-kadiry (masse volumique) vary fotsy manta 0.7g-0.9g/cm3, aza afangaro amin'ny hakitroka (densité)
- Ka ny lanjam-bary iray kapoaka izany dia P = lanjan'isam-bentin-kadiry x Hadirin'ny kapoaka
Miovaova izany io lanjam-bary iray kapoaka io.
Namoy mpampianatra mpanabe ny Lycée Bemahazemona Ambondromisotra, Distrika Ambatofinandrahana. Maty notifirin’ny jiolahy tamin’ny basy ny mpampianatra Histo-géo iray ao an-toerana, fantatra amin’ny anarana hoe : Ramose Haja.
Nanao taingin-telo tamin’ny moto izy sy ny vadiny ary ny zanak’izy ireo lahikely. Avy namonjy fandevenana tany Fianarantsoa izy telo mianaka, ary andalana hiazo an’i Ambondromisotra no notifirin’ny jiolahy nony teo amin’ny tetezan'i Bemanta, amin’ny lalam-pirenena faha-35, androany maraina.
Maty tsy tra-drano ilay ramose, nitondra ny moto ; naratra avokoa ny vady aman-janany. Nalefa notsaboina tao amin’ny hopitaliben’Ambositra ireto farany.
vendredi, 22 janvier 2021 21:11
Analamanga : Sekoly miisa 15 no hisitraka rano fisotro madio avy amin’ny Japoney
Sekoly miisa 15, mpianatra 1686 ary mpampianatra miisa 78 eto amin’ny Faritra Analamanga no hisitraka toerana famatsiana rano fisotro madio avy amin’ny Masoivoho Japoney.
Hahazo tombontsoa amin’izany tetikasa izany ny EPP avy ao amin’ny Cisco Antananarivo Avaradrano, Atsimondrano, Manjakandriana ary Anjozorobe.
Tanjon’ity tetikasa ity ny hanamora ny fanomezana lanja ny fahadiovana amin’ny alalan’ny fanasana tanana amin’ny savony sy ny rano, ary ny fahafahana misitraka rano fisotro madio.
Tontosa androany teny amin’ny Masoivoho Japoney eny Ivandry ny fanaovan-tsonia ny taratasy fifanaraham-panomezana izany teo amin’ny Masoivoho Japoney miasa sy monina eto Madagasikara sy ny lehiben’ny fikambanana Miarintsoa izay hanatanteraka ny asa.
Nanotrona izany ny Minisitry Fanabeazam-pirenena Dr Sahondrarimalala Marie Michelle, ny Sekretera jeneralin’ny Minisiteran’ny Rano, ny Fanadiovana ary ny Fidiovana ary ny Talen’ny kabinetran’ny Faritra Analamanga.
(Loharanom-baovao : MEN)
Namoaka « Note de service » ny Mpitahiry ny tombokasem-panjakana, minisitry ny fitsarana Andriamahefarivo Johnny Richard ny 20 janoary 2021 manendry Sekretera jeneraly mpisolo toerana.
Ny Général de division Rasolofo Lumène no notendrena ho amin’izany andraikitra izany, taorian’ny nanendren’ny filohan’ny Repoblika ho Senatera an’i Imbiki Herilaza, Sekretera jeneraly tompon-toerana. Efa nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra ny alarobia 20 janoary 2021 teo, rahateo ny didim-panjakana nanendrena an’ity farany tamin’io toerana io.
Betsaka ny tohina tamin'io « Note de service » io. Re koa aza izao fa manambana ny hanao "Journée d'indignation" ireo Mpitsara amin'ny fitsarana manerana ny Nosy.
Teknika be ny asa aman’andraikitry ny Sekretera jeneraly satria tsy maintsy mahafantatra amin’ny antsipirihiny ny pitsopitson'ny ministera sahaniny sy ireo mpiasa rehetra izy.
Azo antoka fa tsy voafehin'io jeneraly io izany satria sady raha ny fikaroham-baovao dia tsy nivoaka avy ao amin'ny Sekolim-pirenena fanofanana ho mpitsara sy ho mpirakidraharaha na ENMG Tsaralalana izy, no tsy mpitsara, na koa mpisolovava, fa Mpanolontsaina teknika mpikambana tao amin’ny kabinetran’ny minisitra izy izao notendrena ho Sekretera jeneraly mpisolo toerana izao.
Le Ministre des Affaires étrangères, Dr. Tehindrazanarivelo Djacoba A.S. Oliva a présidé, ce 21 janvier 2021, une cérémonie d’adieu en l’honneur de Stanislav Anvarovich Akhmedov, Ambassadeur de la Fédération de Russie à Madagascar.
Arrivé au terme de sa mission à Madagascar, l’Ambassadeur de Russie a été élevé au rang de « Commandeur de l’Ordre National malagasy », en reconnaissance de ses efforts pour le raffermissement des liens d’amitié et de la coopération entre les deux pays.
Stanislav Anvarovich Akhmedov a également assuré le rôle symbolique de Doyen du Corps diplomatique depuis 2016.
vendredi, 22 janvier 2021 20:52
Fitaterana : Fiara mpitatitra olona miisa 38 naiditra « fourrière » fa tsy nanaja fepetra ara-pahasalamana
Taxibrousses sy taxibe suburbains miisa 38 no nogiazana ambalapamonjana mandritra ny 10 andro, nanomboka ny sabotsy 16 janoary 2021 no makaty, noho ny tsy fanajana ireo fepetra samihafa, entina hisorohana ny valanaretina Covid-19.
Tohin’ny fivoriana izay niarahana tamin’ireo koperativa sy mpitatitra izao hetsika fanaraha-maso izao, izay mbola mitohy hatrany.
Tontosa androany zoma 22 janoary 2021 ny fifidianana ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra eto anivon’ny Antenimierandoholona.
Voafidy ho Filoha Lefitra ho an’ny
- Faritany Avaratra ny Loholon’i Madagasikara IMBIKI Herilaza ;
- Filoha lefitra ho an’ny faritany Atsimo ny Loholon’i Madagasikara Rabemananjara Jean Paul Nicolas ;
- Kestiora : Loholon’i Madagasikara Fernand Eddie Serge
- Mpampakateny Jeneraly : Loholon’i Madagasikara Rasolondratsimba Raymond.
vendredi, 22 janvier 2021 14:38
Vidin-jiron'ny Jirama : Misokajy 3
Hatreto dia nosokajian'ny Jirama ho telo ireo foibe mpamokatra herinaratra, ka arakarak'izay fandaniana izay no amarotany amin'ireo mpanjifa, izay mbola sokajiany ho olon-tsotra, mpivarotra, mpamokatra na indostrialy.
Sokajy 1 na Zone 1 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny rano (Energie Hydraulique), na irony barazy irony
Ivotoerana 21 no voakasik'izay.
Sokajy 2 na Zone 2 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny solika mavesatra (Fuel)
Ivotoerana 02 no voakasik'izay.
Sokajy 3 na Zone 3 : Ireo mpanjifa herinaratra vokarina avy amin'ny Gazoala (Gazole)
Ivotoerana 92 no voakasik'izay.
Mazava ho azy, fa tsy mitovy izany ny saran'ny Jiro aloan'ireo mpanjifa ireo arakaraky ny Sokajy misy azy. Ny Sokajy 1, mora kokoa ny saram-pamokarana dia mandoa mora ireo mpanjifa, manaraka azy eo ny Sokajy faha 2, ary mibaby ny lafo indrindra ny mpanjifa ao amin'ny Sokajy faha 3.
Saron'ny Zandary avy ao amin'ny Tobim-paritry ny Zandarimariam-pirenena ao Betafo ny andron'ny 20 janoary 2021 ireo jiolahy namaky ny Kaominina Mahaiza, Distrika Betafo, ka nangalatra ny vata fitehirizam-bola “coffre” milanja 150kg eo, ny alin'ny 17 hifoha 18 janoary lasa teo.
Nisy vola mitentina 742 200 Ariary, solosaina fitondra iray, fahana telma maro tsy mbola niasa, taratasim-bola sy faktiora ary fitomboka maro tao anatin’ilay fitehirizam-bola.
Nidina ifotony ny Zandarimaria nanao fizahàna sy nanokatra fikarohana ny 18 janoary 2021. Natao ny fanarahan-dia ka tany amin'ny 3 km niala ny biraon’ny Kaominina no hita ilay "coffre", izay efa vaky, ary tsy tao intsony ireo rehetra tao anatiny.
Voasambotra avokoa ireo nahavanon-doza, miisa enina, dia ireo nanatontosa ny vaky trano sy ny mpividy halatra, ary tafaverina avokoa ireo entana halatra sy ny ampaham-bola tsy lanin'izy ireo.
vendredi, 22 janvier 2021 14:25
RN6 : Misy mitora-bato ireo fiara mandalo, maro no vaky fitaratra
Fiara manao asa fitaterana amin’ny lalam-pirenena faha6, mampitohy an'Ambondromamy sy Antsiranana iny, no niharan’ny tora-bato ny alin’ny 21 janoary hifoha ity 22 janoary 2021 ity, teo anelanelan'ny tanàna Betomendry sy Ambodibonara.
Tsy nisy aina nafoy na koa entana voarava, saingy vaky fitaratra ireo fiara.